Acer na-ewebata ndị ọhụụ abụọ maka ụlọ na iji aka ọrụ | Akụkọ akụrụngwa
Firmlọ ọrụ Taiwanese Acer na-eji usoro IFA eme ihe iji gosipụta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ na mgbakwunye na ịmepụta mmeghari nke ụfọdụ ụdị ndị dịrịrị n'ahịa. Ugbu a, ọ bụ oge nke ọrụ, ụdị ngwaọrụ nke, n'ihi ọnụahịa dara na afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụzi ihe a na-ahụkarị n’ọtụtụ ụlọ.
Acer ewebatala ụdị abụọ ọhụụ. N'otu aka anyị chọta AcerVL7860, a diode laser projector nke na-enye anyị mkpebi ruo 4k yana ihe dị iche na 1.500.000: 1. Modeldị ọzọ nke hụworo ọkụ na IFA enwere na Berlin bụ P8800, ihe nyocha laser nwere mkpebi 4k, yana mkpebi 1.200.000: 1 dị iche na ihe ruru 5.000 lumens nke nchapụta.
1 Atụmatụ Acer VL7860
2 Atụmatụ Acer P8800 Projector
Atụmatụ Acer VL7860
Ezubere ihe ngosi a maka gburugburu ụlọ, nke mere na ndị hụrụ ezigbo sinima nwere ike ịnụ ụtọ n'ụlọ na ihuenyo 4k nke ruru sentimita 120, ekele maka teknụzụ XPR sitere na Texas Instruments. Acer VL7860 na-enye anyị 3.000 lumens nke nchapụta Emere ya iji nye mma kachasị mma na ụdị ọdịnaya ọ bụla, ọ bụrụ na vidiyo ma ọ bụ usoro onyonyo.
Atụmatụ Acer P8800 Projector
Ezubere ihe nyocha Acer P8800 maka gburugburu ọkachamara, yana gịn 5.000 lumens ihie, na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ onyonyo ma ọ bụ vidiyo ndị egosiri site na ya, na gburugburu ebe anyị na-enweghị ike ime ka ụlọ ahụ gbaa ọchịchịrị kpamkpam. Dị ka ihe atụ gara aga, ọ na-enye anyị ohere mụta ọdịnaya na 4k UHD mma yana 1.200.000: 1 iche ọdịiche na-enye anyị ndị ojii dị ọcha na ndị ọcha na-enwu gbaa.
Banyere ọnụahịa, ụlọ ọrụ enyebeghị ozi a, dị ka nnweta, mana ozugbo ewepụtara ya, anyị ga-emelite edemede a iji tinye ozi ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Acer na-enye ihe ngosi abụọ maka ụlọ na ndị ọkachamara
LG V30: igwefoto abụọ, ihe ntanetị na ihuenyo 6-inch